Iincwadi ezineziphelo ezilungileyo: ukhetho lwethu | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezineziphelo ezilungileyo
Amaxesha amaninzi, xa bethetha ngoncwadi nabahlobo kunye noncwadi, eli binzana linomdla lize: "incwadi ibingeyonto inkulu kangako, kodwa bekufanelekile ukuyifunda ekugqibeleni." Kwaye kulapho umntu azibuza ukuba, ngaba incwadi ixabisa ukuba isiphumo sayo singasishiyi sinencasa emilonyeni yethu? Ngaba isisombululo sesakhelo sigqithile? Makhe sikhangele oku kulandelayo iincwadi ezineziphelo ezilungileyo Ukujongwa kwakhona okuqala ngezivakalisi zokugqibela.
1 Iminyaka Elikhulu yokuba wedwa, nguGabriel García Márquez
2 Ukuhamba noMoya, nguMargaret Mitchell
3 Ulwaphulo-mthetho kunye nezohlwayo, nguFyodor Dostoevsky
4 INkosana encinci, nguAntoine de Saint-Exupéry
5 UAna Karenina, nguLeón Tolstoy
6 Iingcongolo nodongwe, nguVicente Blasco Ibáñez
7 La Regenta, nguLeopoldo Alas Clarín
Nangona kunjalo, ngaphambi kokufikelela kwivesi yokugqibela, wayesele eqondile ukuba akasoze alishiye elo gumbi, njengoko kwakucingelwa kwangaphambili ukuba isixeko sezibuko (okanye izithambiso) sasiza kutshayelwa ngumoya kwaye sigxothwe kwimemori yamadoda ngephanyazo apho u-Aureliano Babilonia wayesandula ukugqiba imisongo, kwaye yonke into ebhalwe kuyo yayingaphindeki ukusukela nanini nanini kuba imigca egwetyelwe ikhulu leminyaka lokuba wedwa yayingenalo ithuba lesibini emhlabeni.
Umhlobo wam wakudala wayengomnye wabo bathi ela binzana likhankanywe kwintshayelelo xa ndafumanisa ukuba wayesanxibile Iminyaka eyikhulu yedwa engxoweni. Kungekudala emva koko, nam ndanesibindi sokuntywilisela kumabali e i Buendía kwaye loo dolophu ilahlekileyo yeCaribbean yeCaribbean ibizwa ngokuba Macondo. Iintsuku zokubonisana nomthi womnombo wabalinganiswa bazo kumzobo kaGoogle, wokudibanisa amabali kunye nokulindela isiphelo esiqinisekileyo, ngokuyinxenye, esiqinisekisa ubume bobugcisa bebali lomhlobo uGabo.
“Ndiza kuyicinga yonke le nto ngomso, malunga noTara. Apho kuya kuba lula ngam ukuyinyamezela. Ewe, ngomso ndiza kucinga ngendlela yokuthetha noRhett. Ngapha koko, ngomso iya kuba lolunye usuku ”.
Ngeli binzana, umke nogquthe, inoveli yabathengisi abaninzi nguMargaret Mitchell yapapashwa ngo-1936 kwaye yahlengahlengiswa kwi-cinema ngo-1939, ishiye isiphelo sivulekile kwingcinga yomfundi othi kuwo onke amaphepha alandele ibali lothando kunye nentliziyo ebuhlungu UScarlett O'Hara kunye noRhett Butler, abalinganiswa banyanzelwa ukuba basinde embindini weMfazwe yamakhaya. Umbuzo ngulo: Ngaba ucinga ukuba uScarlett uza kuyifumana indlela yokubuyisa uRhett?
Kodwa apha liqala elinye ibali, lelo lokuvuselelwa kancinci komntu, lokuzalwa kwakhe okuqhubela phambili, ukuhamba kwakhe ngokuthe ngcembe ukusuka kwelinye ilizwe ukuya kwelinye kunye nolwazi lwakhe lwenyani yenyani engakhathalelwanga kwaphela. Kukho konke oku kuya kubakho izinto zokwenza ingxelo entsha, kodwa eyethu iphelile.
Kuwo wonke umsebenzi kaDostoevsky, umfundi wadibana needemon zikaRodion Raskolnikov, umfundi owathi ngenye imini wagqiba kwelokuba abulale umntu obolekisa ngemali aze ayibe yonke imali yakhe ukuze anqwenele ubomi obunempumelelo awayekholelwa ukuba ubufanele. Kwaye ngaphandle kwembali ethi uninzi luyaqhubeka nokucinga ukuba luyinkimbinkimbi ngokuxhomekeka kubaphulaphuli, umsebenzi wawusinga kwindawo yokuhlala enomoya wesiphelo esonwabisayo ngaphandle kwegama elibi elibali lalichitha kuninzi lweyelenqe.
Ngaba ungathanda ukuphinda ufunde Ulwaphulo-mthetho kunye nezohlwayo?
INkosana encinci, nguAntoine de Saint-Exupéry
Vavanya ngononophelo ukuze wazi ukuba ungayiqonda njani, ukuba ngenye imini, uhamba ngeAfrika, uwela intlango. Ukuba kunokwenzeka udlule, ungangxami, ndiyakucela, kwaye ume kancinci, phantsi kwenkwenkwezi. Ukuba umntwana uza kuwe, ukuba lo mntwana uhleka kwaye uneenwele zegolide kwaye akaze ayiphendule imibuzo yakho, uya kukhawuleza uqagele ukuba ngubani. Yiba mnandi kuye! Kwaye mandazise ngokukhawuleza ukuba ubuyile. Ungandishiyi ndilusizi!
Kwaye yaphela enye ye eyona misebenzi ingapheliyo kwimbali. Kuba njengaleyo i-Saint-Exupéry iguqukele kwi-aviator elahlekileyo embindini wentlango, sonke saphinda sayifumana inkolo yethu emhlabeni ngenxa yalomntwana owayevela emajukujukwini eze kuhlalutya ngcono uluntu lwethu kuneengcali ngokwazo. Enye yeencwadi ezineziphelo ezilungileyo, ngaphandle kwamathandabuzo.
Funda Inkosana encinci?
UAna Karenina, nguLeón Tolstoy
Kodwa ukusukela namhlanje ubomi bam, bonke ubomi bam, nokuba kwenzeka ntoni, abusayi kuba sengqiqweni, abuyi kuba nantsingiselo njengoko bekunjalo ukuza kuthi ga ngoku, kodwa kuwo onke amaxesha alo aya kuba nengqondo engathandabuzekiyo Kulungile, ukuba ndibenakho ukuyifaka.
Ngaphandle kohlelo lokuqala olwavusa ukungavisisani phakathi kukaTolstoy kunye nabapapashi bakhe, ixesha ekugqibeleni laphela liqinisekisa ubukhulu besiphumo somnye imisebenzi emikhulu kuncwadi Russian. Ukuzimisela kukaVronsky, olangazelela ukusweleka emva kokuzibulala kuka UAna Karenina, ngokugxila kubomi obulula kunye nokubethelela ezona njongo zintombi ye-protagonist, yaba sisiphumo esingaphezulu kwempumelelo.
Iingcongolo nodongwe, nguVicente Blasco Ibáñez
Kwaye ngelixa umalume uTòni ekhala ngokuthula kwasekuseni njengesikhalo sokuphelelwa lithemba, uLa Borda, ebona umva kayise, wayame ngaphesheya kwengcwaba waza wamanga intloko eqabileyo ngokumanga komlilo, ukuthanda okukhulu, uthando. ngaphandle kwethemba, nobuganga, phambi kwemfihlelo yokufa, ukutyhila okokuqala imfihlelo yobomi bakhe.
Unxantathu owenziwe nguTonet, uNeleta kunye noLa Borda kwi Iingcongolo nodaka Kwaphela ngokusweleka kukaTonet kunye nenjongo kadadewabo owamkelayo ukuba avume imfihlo awayeyiphethe kuyo yonke inoveli.
La Regenta, nguLeopoldo Alas Clarín
Emva kokuvala wayenoloyiko lokuba kukho into ayivileyo apho; ucofe ubuso bakhe waya esangweni wajonga ngasemva kwecawa, ejonge ebumnyameni. Phantsi kwesibane wayecinga ukuba ubona isithunzi esikhulu kunangaphambili ... ncwina.UCeledonio waziva engumnqweno olusizi, ukugqwethwa kokugqwesa inkanuko yakhe; uMmeli kwaye wancamisa imilebe. UAna wabuyela ebomini ekrazula inkungu yesiphithiphithi ebangele ukuba naSebenzisa. wayecinga ukuba uva esiswini sakhe esibandayo, esibhityileyo somqombothi emlonyeni wakhe.
Kwaye ke, Ana, ophambili UMlawuli, bathotywa kukujongwa phantsi ngabantu be Endala, loo ndawo kumaphondo apho uClarín wenza esinye sezimvo ezinkulu zoluntu lwaseLa Restauración.
Zithini kuwe iincwadi ezinesiphelo esihle?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi ezineziphelo ezilungileyo
Ehlabathini lonke kubabhali abali-10